Indawo Yasekhaya Maruska 01 - I-Airbnb
Indawo Yasekhaya Maruska 01
São Roque, São Paulo, i-Brazil
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Charles Pierre
U-Charles Pierre Ungumbungazi ovelele
I-Sítio Maruska itholakala ku-São Roque Wine Route, e-condominium yomndeni imizuzu emi-5 ukusuka endaweni yokukhiqiza iwayini enkulu. Indlu izimele ngokuphelele. Inendlu yokugezela ehlotshisiwe, umbhede weQueen Size, iheater kawoyela, ikhishi eligcwele kuvulandi elinezitsha zonke. Ukuphepha nobumfihlo endaweni yentaba enombono omuhle. High Speed WiFi for Free Home Office. Izilwane ezifuywayo zamukelwe.
Ihhovisi Lasekhaya eline-inthanethi ye-broadband ngokwemvelo
professional dart umdlalo
Lapha ungasebenzisa izinkuni ezinhle lapho i-suite ikhona, izinyoni zokubuka, ama-squirrels, ama-toucans, izinkawu ezivela ngezikhathi ezithile. Sebenzisa ukushwibeka kwentambo esihlahleni, khanyisa umlilo wakho ngaphansi kwesibhakabhaka esigcwele izinkanyezi. Yenza izindlela zakho zokupheka, funda incwadi, hamba uzungeze indawo futhi ubone ukushona kwelanga okuhle kakhulu esifundeni. Vula iwayini futhi ujabulele izikhathi ngokuhluka okuningi nokuvikeleka. Vala futhi uhlale endaweni yepulazi ngokunethezeka noma usebenze ukude ngekhwalithi, impilo nokuphepha.
Ngisekuqhubekiseni Umzila Wewayini, ku-asphalt, imizuzu engu-5 ukusuka e-Vinícola Góes nokunye okukhangayo emzileni. Kuyisifunda samapulazi angempelasonto, izindlu zokulala kanye namabhizinisi endawo ahamba phambili. Indawo yokubhaka, imakethe, ikhemisi kanye negalaji likaphethiloli imizuzu emi-3 ngemoto, ihlale igandayiwe.
Ibungazwe ngu-Charles Pierre
Ngihlala edolobheni laseSão Roque. Ukuba endaweni, kuyohlale kujabulisa ukukunikeza amathiphu esifundeni.
UCharles Pierre Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- São Roque namaphethelo